Momba anay | Cangzhou Kuntai Metal vokatra Manufacturing Co., Ltd.
Momba ny KUNTAI
Fototra sy toerana
Hatramin'ny niorina tamin'ny taona 2010, Cangzhou Kuntai Metal Products Manufacturing Co., Ltd dia manana laza maharitra ela momba ny kalitao sy ny fanavaozana amin'ny famokarana ny valifaty sy famafazana SS. Ao amin'ny Cangzhou, Faritanin'i Hebei, izay tena akaikin'ny seranan'i Xingang, Tianjin, no manome ny toe-draharaha fifamoivoizana mety.
Miaraka amin'ny fanondranana any amin'ny firenena mihoatra ny 30 dia nametraka laza malaza izahay avy amin'ny mpanjifa any Eropa, Amerika, Atsinanana, Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa eran'izao tontolo izao. Nandritra ny traikefa 10 taona no nahafantarantsika ny fomba hamahana ireo fitarainana tetikasa ho an'ny indostria rehetra, satria nanokana ekipa injeniera izahay mba hiatrehana ny olana rehetra momba ny fampiharana amin'ny sehatry ny indostria.
KUNTAI dia manolotra vokatra marobe mifehy ny famatsiana mikoriana, ahitana Ball Valve, Gate Valve, Globe Valve, Check Valve, Y Strainer, Camlock / Quick Coupling, ary ireo karazana fitaovana vita amin'ny vy vita amin'ny vy, misy fitaovana lehibe 304 / 304L / 316 / 316L, sns. Rehefa mitady valiny sy fatra SS avo lenta any Shina ianao dia matokia fa hanome anao tolotra ampy ho azy i Kuntai.
Ny vokatra KUNTAI dia ampiharina betsaka amin'ny tanimbary mifandraika amin'ny menaka sy solika, simika & petro-simika, indostrian'ny sakafo, famatsiana rano, fikarakarana rano, fananganana & fananganana, indostrian'ny hazavana, famokarana herinaratra, fanafody, bio-teknolojia, fitaovana amin'ny laboratoara, ranomasina ary ny hafa.
KUNTAI dia mahasahana faritra 17000 metatra tora-droa, manana mpiasa mihoatra ny 200, manao 800 isan-taona.
Manana tsipika famokarana feno izahay, avy amin'ny endrika famolavolana bobongolo, fanariana, milina ho an'ny fitsaboana any ivelany. Raha ny resaka teknolojia, manana hery maha-R&D matanjaka isika mba hahafahana mameno ny fepetra takian'ny mpanjifa ， toa ny lavaka lalina, lava-kafaliana, toerana tsara, sns.
Izahay dia nahazo ny taratasy fanamarinana rafitra momba ny kalitao momba ny kalitao IS0 9001, fanarahana ny taratasy fanamarinana ny RoHS ary ny fanamarinana CE, izay manamarina fa azo antoka sy mendrika ny vokatra.
KUNTAI dia orinasa tsirairay izay vitany ny vokatry ny fahazotoana sy ny fanoloran-tena ataon'ny mpiasa ao aminy. Noho ny fahatokisana fa ho kalitao tsara amin'ny alàlan'ny fitsirihana henjana isaky ny dingana, dia manome fenitra hatsaran'ny vokatra ho an'ireo mpanjifantsika ankehitriny sy ho avy isika. Na aiza na aiza misy anao dia na inona maninona ny zavatra takinao dia manome antoka haingana isika hamaly izay rehetra ilainao. Natao ho anao izahay!
Azafady mba mifandraisa info@kuntaivalve.com raha mila fanazavana fanampiny!